Bitcoin, ihe ọ bụ, otu o si arụ ọrụ na ebe ịzụta Bitcoins | Akụkọ akụrụngwa
Anyị na-anụ banyere Bitcoins ruo ọtụtụ afọ, ọ bụghị naanị na akụkọ, kamakwa na usoro telivishọn. Nsogbu bụ na n'ọtụtụ oge, karịsịa na usoro telivishọn, Ihe Bitcoins bụ n'ezie na ihe anyị nwere ike iji ha mee bụ agbagọ. Bitcoin ọ bụ ego mebere emepe Ọ bụghị ikike ọ bụla na-achịkwa ya, ọ naghị echekwa ya na ụlọ akụ, ọ nweghị ike ịchọpụta yana n'ọtụtụ oge, ọkachasị n'oge mmalite ya, e jikọtara ya na ọrụ iwu na-akwadoghị metụtara ire ọgwụ na ngwa ọgụ (Silk Road ga-ada maara anyị niile). Ma oburu na anyi gwuo ala n'ime ihe nkpuru ego ohuru a bu n'ezie, anyi puru ihu na o nwere ike ibu, na nke adighi anya, ego nke ndi oru ji ya.
Tụkwasị na nke a, Bitcoin enwewo mmụba dị egwu na ọnụahịa ya, ọ bụ ya mere o ji bụrụ nnukwu ohere itinye ego maka ndị chọrọ ịlaghachi oke ego na ego ha. € 5.000, € 10.000, € 200.000, ... e nwere ọbụna ndị ọkachamara na ngalaba ahụ na-ebu amụma ọdịnihu ebe Bitcoin nwere ike ịba nde euro. N'ịbụ ndị nkwupụta dị otú ahụ chere, ọtụtụ mmadụ na-abanye n'ahịa Bitcoin dị ka ndị na-etinye ego.
Ị chọrọ tinye ego na Bitcoin? Anyị na-enye gị 10 $ FREE na Bitcoin site na ịpị ebe a
1 Gịnị bụ Bitcoin?
2 Creatednye kere Bitcoin?
3 Ego ole bụ ọnụ ahịa Bitcoin?
4 Ebee ka m nwere ike ịzụta Bitcoins?
5 Otu esi egwuputa Bitcoins
6 Onye na-achịkwa Bitcoins?
7 Uru nke Bitcoins
8 Uzo ojoo nke Bitcoins
Gịnị bụ Bitcoin?
Dịka m kwuru n'elu, Bitcoin bụ ego dijitalụ, ọ nweghị ego ma ọ bụ mkpụrụ ego nkịtị nke iji mepụta azụmahịa. A na-echekwa Bitcoins na obere akpa ego nke anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ozugbo na ịntanetị. Hapụ ịhapụ ihe eji emebu ihe ejiri mee ya, ugbu a Microsoft, Steam na-egwu egwu egwuregwu, Las Vegas casinos na ọbụlagodi NBA basketball na-anabata ego dijitalụ a dị ka ụdị ịkwụ ụgwọ, mana ọ bụghị naanị ha ebe ọ bụ na ọnụ ọgụgụ azụmahịa na nnukwu ụlọ ọrụ ndị na-amalite ịkwado iji ego a na-abawanye.
Nweta $ 10 FREE na Bitcoin site na ịpị ebe a
Na nkenke anyị nwere ike ikwu nke ahụ Bitcoin bụ ego zuru ezu nke dijitalụ, nke ekwesighi na nke ndị ọrụ jiri. N'ihi enweghị ihe ọmụma banyere ego ọhụrụ a nke nzukọ ego ọ bụla anaghị achịkwa, mba ụfọdụ amalitela igbochi weebụsaịtị ndị na-ekwe ka arụmọrụ na ego a, dị ka Russia, Vietnam, Indonesia. Otú ọ dị, mba ndị ọzọ dị ka United States na Brazil enyelarị ATM ebe anyị nwere ike ịzụta Bitcoins ozugbo site na ijikọ ha na obere akpa anyị.
Enwere cryptocurrencies ndị ọzọ dị ka Ether, Litecoin na Ripple mana eziokwu bụ na Bitcoin bụ taa bụ naanị cryptocurrency na mkpa na ibu n'ụwa niile.
Creatednye kere Bitcoin?
Ọ bụ ezie na enweghị ezigbo ihe akaebe banyere onye kere ya, ọtụtụ egwu kredit Satoshi Nakamoto na 2009, agbanyeghị na achọpụtara echiche izizi iji mepụta ego na-achọghị ka a kpọọ aha na 1998, na ndepụta ndepụta nke Wei Dai mepụtara. Satishi rụrụ ule mbụ nke arụmọrụ nke echiche Bitcoin na ndepụta nzipu ozi nke mahadum ya, ọ bụ ezie na obere oge ọ hapụsịrị ọrụ ahụ na-ahapụ oke osimiri nke obi abụọ ma na-akpata enweghị nghọta banyere isi mmalite nke Bitcoin dabere na ezigbo ọrụ.
Na 2016, ndị Australia Craig Wright, kwuru na ya bụ onye okike nke ego dijitalụ n'akụkụ Dave Kleiman (nwụrụ na 2013) na-ekwupụta na aha Satoshi Nakamoto bụ ụgha na ọ bụ ha abụọ kere ka ọ zobe onwe ya. Craig gosipụtara usoro igodo nzuzo ndị metụtara mkpụrụ ego mbụ nke Nakamoto kere, mana ọ dị ka ozi ọ kpughere iji gosipụta na ọ bụ onye okike ezughị ma ugbu a aha onye okike nke Bitcoins ka nọ n'ikuku .
Ego ole bụ ọnụ ahịa Bitcoin?
N'afọ gara aga, ọnụahịa Bitcoin arịgoro 500%, n'oge a na-edekwa, ọnụego Bitcoin dị ihe dịka $ 2.300. N'agbanyeghị ọganihu nke ego ahụ na-enwe n'afọ ndị na-adịbeghị anya, ọtụtụ ka nwere obi abụọ mgbe ha na-etinye ego na dijitalụ ego a, na-edekọ ya dị ka afụ mmetụta nke na-adịghị anya ma ọ bụ mgbe e mesịrị ga-agbawa, na-ewere ego nke ndị ọrụ niile tinyere oge na ego na ego a.
Do chọrọ itinye ego na Bitcoin?
Pịa Ebe a ịzụta Bitcoin
Otu isi ihe dị na ihu ọma ya bụ na adịghị adabere n’ahụ ọ bụla na-achịkwa ya ma nwee ike ịchịkwa ya, nke mere na ọ bụ naanị ndị ọrụ na ndị na-egwuputa ihe, yana ọnụ ọgụgụ nke arụmọrụ emere kwa ụbọchị, nwere ike imetụta ịrị elu ma ọ bụ ọdịda nke ọnụahịa ha. The dị iche iche ngwa ma ọ bụ ibe weebụ na-ekwe ka anyị na-azụ ma na-ere Bitcoins na-enye anyị see okwu na nri oge anyị chọrọ iji mezuo azụmahịa nke mere na anyị maara na mgbe niile ọnụ ọgụgụ nke Bitcoins na anyị na-aga inweta. Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịzụta Bitcoins, nkwanye anyị bụ ka ị jiri ikpo okwu siri ike ma nwee nchedo dị ka Coinbase. Pịa ebe a imeghe akaụntụ na Coinbase ma zụta Bitcoins mbụ gị.
Ebee ka m nwere ike ịzụta Bitcoins?
Ọ bụ ezie na uru nke Bitcoins nwere ike ịdị iche iche ihe karịrị otu afọ, ọtụtụ na ndị ọzọ ndị ọrụ nwere mmasị itinye ego na cryptocurrency a. Ugbu a na ịntanetị anyị nwere ike ịchọta ọnụ ọgụgụ dị ukwuu nke ibe weebụ nke na-enye anyị ohere itinye ego na Bitcoins. Mana n'etiti ndị niile anyị nwere ike ịchọta, ọtụtụ n'ime ha chọrọ ịchekwa ego anyị n'enyeghị ihe ọ bụla na nloghachi, anyị gosipụtara Coinbase, otu n'ime ndị mbụ nzọ na ego a na-abụghị nke etiti na ahaghị aha fọrọ nke nta ka ọ bụrụ na mbido.
Iji nwee ike zụta Bitcoins site na Coinbase anyị aghaghị budata ngwa dị iche iche maka sistemụ arụmọrụ ọ bụla: iOS ma ọ bụ gam akporo. Ozugbo anyị debanyere aha ma mezue usoro nkwenye ole na ole, anyị na-ejupụta na akaụntụ akaụntụ akụ anyị ma anyị nwere ike ịmalite ịzụta Bitcoins, Bitcoins a ga-echekwa na obere akpa nke ọrụ a na-enye anyị, site na nke anyị nwere ike ịkwụ ụgwọ ndị ọrụ ndị ọzọ na nke a mkpụrụ ego ma ọ bụ chekwaa ha ruo mgbe ọnụahịa ahịa ha dị elu karịa nke dị ugbu a.
Echela echiche ugboro abụọ wee nweta $ 10 FREE na Bitcoin site na ịpị ebe a
N'otu ngwa anyị nwere ike ngwa ngwa nweta uru nke Bitcoin n'oge ịzụrụ ma ọ bụ ire, ka anyị wee ghara inwe mkpa ịkpọtụrụ ibe weebụ ndị ọzọ tupu anyị emee usoro ahụ. Dịka iwu zuru oke, egosiputara uru nke Bitcoin na dollar, yabụ ọ bụ ihe amamihe iji zụta ego a na dollar ma ọ bụghị na euro, ma ọ bụghị na anyị chọrọ ida ego na mgbanwe ndị akụ gbanwere iji mezuo azụmahịa ahụ.
Otu esi egwuputa Bitcoins
Iji malite itinye isi gị n'ime ụwa Bitcoins ịchọrọ ihe mbụ njikọ ,ntanetị, kọmputa dị ike na sọftụwia akọwapụtara nke ọma. Na ahịa anyị nwere ike ịchọta ndụdụ dị iche iche nke ngwa mmeghe emeghe iji nweta Bitcoins, ọ dabere na nke kachasị mma maka mkpa gị. Usoro m na-egwupụta Bitcoins dị mfe, ebe ọ bụ na ndị otu gị na-elekọta ya, yana ọtụtụ puku kọmputa ndị ọzọ, ịhazi azụmahịa ndị a na-arụ n'ahịa ma nakọta Bitcoins. O doro anya na ọtụtụ ndị ọrụ ị na-arụ ọrụ ka ị nwere ike inweta Bitcoins, ọ bụ ezie na ọ bụghị ihe niile mara mma dị ka ọ dị.
Mgbe enwere asọmpi karịa, ohere ndị otu gị ga - eji mee ka azụmahịa belata ka ọnụọgụ uru belatara. Ọ dịghị onye nwere ike ijikwa usoro ahụ iji mụbaa ego nke Bitcoins, naanị ihe a ga-eme bụ ịmepụta ugbo nwere ọtụtụ kọmputa jikọtara na netwọkụ, nke n'aka nke ya ọ gụnyere ụgwọ dị oke ọkụ, na-agụghị ego nke akụrụngwa, nke ga-enwerịrị ike.
Ọsọ nke etinyere ha na-ebelata ka enyere Bitcoins, ruo mgbe ọnụ ọgụgụ nke 21 nde ruru, n’oge nke ọ bụla enweghị ego eletrọniki nke ụdị a nwere ike ịmepụta. Mana iru ọnụego ahụ ka nwere ogologo oge ịga.
Nhọrọ ọzọ maka bitcoins n'ụzọ dị mfe karị bụ ịgbazite usoro nke Bitcoins ígwé ojii na-egwuputa.
Onye na-achịkwa Bitcoins?
Nsogbu nke Bitcoins na-anọchite anya mba na nnukwu ụlọ akụ bụ na ọ nweghị ụlọ ọrụ na-ahụ maka ịchịkwa ihe niile metụtara ego a, ihe doro anya na ọ naghị eme ha ihe ọchị, ọkachasị nwa oge n'akụkụ a ebe Bitcoin na-amalite ịghọ. ego nkịtị, ọ bụ ezie a ka nwere ọtụtụ afọ ịga n'ihu tupu ọ bụ ezigbo ọzọ.
Coinbase, Blockchain.info na BitStamp na-ahụ maka ịnye akụrụngwa Bitcoin, bụ ọnụ nke na-arụ ọrụ maka uru, n'ihi ya, ha na-agagharị mgbe niile maka ọdịmma nke ha, onye ọ bụla nyere ha ego kachasị, mana ha abụghị ndị na-etinye ha na mgbasa, ọrụ ahụ dabara ndị na-egwuputa ihe, ndị mmadụ na-ekele maka sọftụwia akọwapụtara nke ọma na ike nke kọmputa gị / s nwere ike ịga Ngwuputa na ịkpata Bitcoins.
Uru nke Bitcoins
NcheEbe ndị ọrụ nwere njikwa zuru oke na azụmaahịa ha niile, ọ nweghị onye nwere ike ịgba ụgwọ akaụntụ dị ka kaadị akwụmụgwọ ma ọ bụ nyocha akaụntụ nwere ike.
Ntughari. Ozi niile metụtara Bitcoins dị n'ihu ọha site na blockchains, ndekọ ebe ozi niile metụtara ego a dị, ndekọ na-enweghị ike gbanwee ma ọ bụ mezie ya.
Isslọrụ adịghị adị. Kslọ akụ anaghị akwụ ụgwọ maka ọrụ ha na-akwụ anyị na mgbakwunye na iji ego anyị egwu egwu. The ịkwụ ụgwọ anyị na-eme na Bitcoins, ọtụtụ mgbe bụ kpamkpam free ebe ọ bụ na e nweghị intermediary na-eme ya, ọ bụ ezie na mgbe ụfọdụ, dabere na ụdị ọrụ anyị chọrọ ịkwụ ụgwọ, ụfọdụ ọrụ nwere ike etinyere, ma na kpọmkwem okwu.
Ngwa ngwa. Site na Bitcoins anyị nwere ike izipu ma nata ego ọfụma site na ma ọ bụ ebe ọ bụla n'ụwa.
Uzo ojoo nke Bitcoins
O doro anya, ọ bụghị naanị ụwa, na obere ụlọ ọrụ ego, na-akwado mgbasa ozi nke ego a, ọkachasị n'ihi na ọ nweghị ụzọ ọ bụla ọ ga-esi setịpụ ma chịkwaa ya.
Nkwụsi ike. Kemgbe amụrụ ya, Bitcoins eruola onu ogugu ndi kariri otu puku dolla kwa otu, maka ubochi mgbe nkea gasiri igha uru onu ahia ole na ole. Ihe niile dabere na arụmọrụ na olu nke Bitcoins na-akpụ akpụ n'oge ahụ.
. Ewu ewu. O doro anya na ọ bụrụ na ị jụọ onye a maara maka bitcoins na onye na-ejighị nkà na ụzụ, ha ga-agwa gị ma ị na-ekwu maka ị drinkụ mmanya ma ọ bụ ihe yiri ya. Ọ bụ ezie na ọtụtụ ụlọ ọrụ na nnukwu ụlọ ọrụ na-amalite ịkwado ego a, a ka nwere ọtụtụ ụzọ ị ga-aga tupu ọ ghọọ ego nkịtị kwa ụbọchị.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » Technology » Bitcoin, kedu ihe ọ bụ, olee otu o si arụ ọrụ na ebe ịzụta Bitcoins
Cryptocurrencies na-adabere na sistemụ "ọgbọ" (site na onye ọrụ gaa na onye ọrụ) nke mere ka o kwe omume ịkwụsị nsogbu nke ụzọ nkwụnye ụgwọ mbụ: mkpa maka ndị ọzọ.
Tupu e mepụta cryptocurrencies, mgbe ịchọrọ ịkwụ ụgwọ n'ịntanetị, ị ga-abanye na nyiwe dịka Banks, Paypal, Neteller, ... wdg.
Site na Bitcoin Bitcoin nke a agbanweela ebe ọ bụ na ọ dịghị mkpa ịnwe ahụ ọ bụla n'azụ ego a na-enweghị ego, ịbụ netwọkụ nke ndị ọrụ (ọtụtụ puku kọmputa gburugburu ụwa) na-eme nke na-ejide n'aka na ha mere nlekota, njikwa na ndebanye aha nke azụmahịa.
Maazị Craig Wright, nke a abụghị Satoshi. Nwoke a bụ onye na-anabata ihe ọghọm nke otu draịvụ draịva m jiri.
Mmekọrịta Finney, bụ azụmahịa nke m mere na pc m, Core 2 Duo na 2gb nke ebule na 80 diski diski, ka m tụbara na mpempe akwụkwọ 9 nke Pdf nke Bitcoin, yana iji tụnyere iwu Moore, na laptọọpụ m .
E kwuru na azụmahịa sitere na PC m gaa na laptọọpụ Acer Aspire, na ezigara draịvụ ike 2,5 nke laptọọpụ zigara ya, n'ihi njehie. Mkpakọrịta mụ na nwoke a abụghị karịa azụmahịa, amaghị m ya, amaghịkwa m ihe ọ chọrọ, ma ọ bụ nzube nke okwu a niile.
Azụmaahịa Finney bụ nnwale mbụ m mere, site na ip yana ọdụ ụgbọ mmiri 8333 gara nke ọma. Mụ na Finney kpuchiri ntinye faịlụ na azụmahịa iji hazie nzukọ.
Nke a bụ otu n’ime eziokwu na ihe omimi m ekpughere gị taa.
Taa, aga m anọgide na-amaghị aha, mana oge a n'adịghị ka afọ ndị na-adịbeghị anya, ana m anabata ikwu okwu karị.
Zaghachi na Satoshi Nakamoto
Mkpa: na Spain, jiri LiviaCoins.com zụta ma ọ bụ ree bitcoins. Ọ bụ ngwa ngwa na mfe
Zaghachi Jaime Noble
Microsoft chọrọ jaak 3,5mm ka ọ laghachite na smartphones